tena » vaovao » Hoso-doko ao amin'ny afovoan-trano
Human faniriana ho fahatsaran-tarehy - Tsy zava-baovao. Tamin'ny fotoana prehistoric,, razambentsika nandravaka ny rindrina lava-bato petroglyphs: izany dia manana faniriana voajanahary an-trano mba hahatonga ny Cozy, tsara tarehy. Ankehitriny, na izany aza, manamafy ny expressiveness ny fomba anatiny, ho anisan'ny famolavolana sy ny foto-kevitra fotsiny ny sasany manampy loko ny tontolo iainana ihany koa dia afaka manda sary hoso-doko. Tsara be kanto miova hatramin'ny andro fahiny: nahazo endrika vaovao sy ny endrika, fa nihazona ny asa am-boalohany. Na izany aza, mandoko asa - mba hanome fahafinaretana hatsarana.
Ankehitriny Painting in anatiny, ireo sary amin'ny rindrina, soratra voasokitra, sary fifehezan, "Mifoka rivotra fiainana" ao an-trano. Manomboka izao ny toe-draharaha hitsahatra mandrakizay ho fotsy sy hankaleo.
Ho an'ny sasany anatiny hoso-doko - ny tonga lafatra safidy?
Tsy misy teritery. Visual Arts - mahomby Ankoatra ny fomba mahazatra-trano, minimalist Studio trano, trano ao amin'ny fomba "efi" sy ny tsy faneva toerana tsy misy foto-kevitra tokana anatiny.
tsy zava-dehibe, Na mifikitra amin'ny fomba iray ao amin'ny ravaka, или предпочитаете творческий хаос – настенная живопись в интерьере никогда не будет лишней. Но главное тут – создать гармонию, выбрав подходящие по стилю и смыслу варианты. Проявите капельку фантазии, и Вам это удастся!
Создать яркий цветовой акцент, mba hisarika ny saina;
Mba hanao trano tontolo iainana bebe kokoa mifanohitra;
Maso hanitatra ny toerana, na ny mifanohitra - hanampy coziness ny efitrano loatra fatra-paniry laza.
Ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fifidianana:
Dia tsy maintsy hanaraka fomba fandikana anatiny, hamindra ankapobeny "fihetseham-po" ny mpijery, no manomana ny mpamaky.
Fifantenana ny loko dia azo atao amin'ny fomba roa - Mifanohitra amin'izany kosa ny fitsipika sy ny fitsipiky ny tsipirian'ilay. Ao amin'ny tranga voalohany, sary - misy mifaritra mangirana eo amin'ny efitrano Tint, Faharoa fandikana zavatra mifanaraka amin'ny voaravaka loko amin'ny efi-trano, lasa iray aminy.
Arakaraka ny fananahana sy ny ambaratonga tokony voafantina araka ny haben'ny ny zavatra hafa ao amin'ny efitrano. Ohatra,, teo an-doha fandriana iray goavana dia hijery fandaharana mahasoa ny sary hoso-doko lehibe, avy eo, toy ny fandikana kely "dia ho very" ao anatin'ny tontolon-kevitry ny kongonina.
Tsarovy: sary hoso-doko ao amin'ny afovoan-trano - taratry ny toe-tsaina, fahitana ny aesthetics. Именно Ваше ощущение красоты, гармонии – всегда важнейший критерий выбора. И уже потом – советы, правила и мнение дизайнеров.
Современная фреска легко наносится на стену: Izy io dia tranonkala, izay tsara rehetra tia ambony. Mba hamorona ny voajanahary, sary mivantana dia afaka mifidy 3d-rindrina.
Mandoko ao amin'ny toerana kilasika
Sarotra ny sary an-tsaina ny mahazatra anatiny reproductions tsy be pitsiny eo amin'ny rindrina! Furnishing singa amin'ny fomba ara-tantara azo advantageously nameno ny endriky ny, Mbola lifes sy ny sary ao amin'ny fomba realism. impressiveness, ny hatsaran-tarehy ny sary hoso-doko tsara Asongadin'ireny ny goavana endriny - sokitra na henjana, tsy misy tsy ilaina haingon-trano singa.
Ny neoclassical Atitany dia miaraka tsotra sketches, izay anjakan'ny fiompy, na an-drenivohitra motifs. Fa somary fisoratana anarana dia zana-kazo tsotra, mazava kokoa amin'ny, mahafinaritra lafiny maso.
Совет: Tsy tokony hifidy maizina loatra, mahakivy sary hoso-doko. Ny efa henjana dia hijery anatiny kilasika tena mahakivy. Ataovy ny toe-po amin-javatra mamirapiratra!
Mandoko amin'ny maoderina anatiny
Saro-takarina sary hoso-doko amin'ny loko mamirapiratra - tena godsend ho minimalist, tsotra maoderina interiors. Mety ho sary contours, tsipika miavaka, ny sasany kosa. Tsy fahazoan-dalana ny loko mafana kokoa: dia hameno ny efitrano nisy an-drenivohitra mahatsapa homey.
Tadidio: manan-danja eo amin'ny sary maoderina anatiny tsy misy fanampiny fisoratana anarana. Modernistic indrindra reproductions mijery tsy misy zana-kazo lehibe sy ny fitaratra.
Hentitra teknolojia avo-tsara Hameno ny mainty sy fotsy ny sary hoso-doko lehibe halebeazana. Fifehezan 'ny maro amin'ireo sary hoso-doko mamorona ny rivotry ny tonga lafatra, tsotra fampiononana. momba ny sary, то тут должны преобладать городские мотивы – урбанистические пейзажи больших городов, репродукции творений современной архитектуры. Также уместны графические портреты.
Fanandramana sy manaraka ny ny tsiro
... ity – One farany tendron'ny, dia te-hanome anao anio. Rehefa dinihina tokoa, dia miaraka amin'ny famolavolana ny fitsipika sy ny fitaka, tsy misy fomba rehetra izao, hifidy ny fomba kanto ny anatiny. Andramo ny fomba hafa, Aza matahotra ny tsy fenitra vahaolana, Mianara fironana vaovao - sy ny hatsaran-tarehy dia mifanaraka hanjaka ao an-anatiny. Mirary anao izahay tena aingam-panahy isan'andro!